Amagumbi Okutyela | Eyomsintsi 2021
Isitulo sokulinganisa ubukhulu besikhokelo kubandakanya ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo kunye nobubanzi kwigumbi lokutyela, ibha yasekhaya kunye nekhitshi. Jonga ubungakanani besitulo sokutya.
Igalari eyakhelwe kwisidlo sakusasa izimvo ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Jonga imifanekiso yeendawo zokutyela ezakhelwe-ngaphakathi, iibhentshi, iziqithi, indawo yokuhlala kunye noyilo lwe-DIY.
Ubungakanani beTafile yokutya (Isikhokelo soBungakanani)
Isikhokelo semilinganiselo yeetafile zokutya ezinobungakanani obuqhelekileyo beetafile zoxande, isikwere, ukujikeleza kunye neetafile zokutya ezimeqanda. Fumana ubude beetafile, ububanzi kunye nokuphakama.
Iindidi zeetafile zokutya (Isikhokelo soYilo lokugqibela)
Iindidi zeetafile zokutyela isikhokelo sokuyila esinezixhobo ezidumileyo, iimilo kunye nezitayile. Khangela ukuba yeyiphi eyona tafile intle yokutya ekhayeni lakho.
Igalari yamagumbi okutyela amahle aneengcango zaseFransi kubandakanya uluhlu lwezitayile kunye nemibono yoyilo. Jonga imifanekiso yeengcango zaseFrance kumagumbi okutyela anoyilo lwangaphakathi nolwangaphandle.
Bungakanani ubungakanani beChandelier yeGumbi lokuTya (Imilinganiselo)
Chonga ukuba yeyiphi ubukhulu bekhandlela kwigumbi lokutyela, thatha imilinganiselo kunye nodonga kunye nobungakanani betafile. Fumanisa ukuba kukude kangakanani ukuxhoma ikhandlela lakho eluphahleni.
Iingcamango zeGumbi lokuDlela eliSemthethweni le-25 (Iifoto zoyilo)
Igalari yeendawo zokutyela ezintle ezisesikweni. Fumana iingcebiso zoyilo lwangaphakathi zokuhombisa amagumbi okutyela asemthethweni, izimvo zefanitshala yegumbi lokutyela kunye noyilo lwegumbi.
Iingcamango ezimbini zeGumbi lokuTyela (Imifanekiso)
Igalari yeendawo zokutyela ezimbini zethoni ukulungiselela iintlobo ezahlukeneyo zoyilo. Jonga imifanekiso yezakhiwo zegumbi lokutyela, imibala yepeyinti, iindonga zesandi, kunye nokukhethwa kwefanitshala.
Iindidi zegumbi lokutyela
Iindidi ezithandwayo zokutyela. Jonga imifanekiso yokhuni oluqinileyo, ithayile, ikhaphethi, ivinyl, ilaminathi kunye nokunye ukutyibilika kwigumbi lokutyela.
Igalari yemibono yegumbi lokutyela yale mihla enezinto ezahlukeneyo ezinetafile, izitulo, izibane, imibala kunye nokuhombisa. Fumana izimvo zangoku zokuhombisa ngokwenza indawo yakho yokutya ememayo.
Iindidi zezitulo zokutya (Izitayile, amalaphu kunye nesikhokelo soYilo)
Isikhokelo kwiintlobo zezitulo zokutyela ezinezitayile ezithandwayo, izixhobo, amalaphu esihlalo kunye noyilo lwasemva. Fumana esona sihlalo sokutyela sihle ekhayeni lakho
Indlela yokuxuba kunye nokuTshatisa izitulo zokutya
Ukudibanisa kunye nokutshatisa izitulo zokutyela kubandakanya iingcebiso ezithandwayo kunye nemibono yoyilo. Fumanisa malunga nokufanisa izitulo zokutyela usebenzisa imibala kunye nezinto zokwakha.
Isikhokelo sobungakanani besitulo sokuhlala kubandakanya ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo kunye nobubanzi kwigumbi lokutyela, ibha yasekhaya kunye nekhitshi. Jonga ubungakanani besitulo sokutya.
Iingcamango zeGumbi lokuDlela Iingcamango (Eyona ndlela ihamba phambili yangaphakathi yoYilo)
Ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo zokukhanyisa kubandakanya izinto ezahlukeneyo, izimbo kunye neentlobo. Bona izibane zegumbi lokutyela zale mihla, ezangoku, ezesintu, ezirustic, ezincinci kunye noyilo lotshintsho.
Imibala yepeyinti egqibeleleyo yokuPenda ngo-2019
Bona imibala yokudlela ephezulu yegumbi lokutyela ngo-2019 nangaphaya. Fumana imibono yokupeyinta kwigumbi lokutyela ukuze uyile uyilo olugqibeleleyo lwangaphakathi kwikhaya lakho kwaye ubone imifanekiso ..
Igalari yegumbi lokutyela le-shiplap imibono kubandakanya iindlela ezithandwayo zokuzisa le nqanaba lendawo yonxweme ekhayeni lakho. Jonga ukuba i-shiplap inokuba yeyiphi na enye indlela ekunokubanjiswa kuyo kwaye unike igumbi lakho lokutyela umtsalane owuthandayo.
iilokhwe zomama womyeni
ukuqesha iilori zokutya zomtshato
dlula kwimibono yewindow
ubhala njani ibali lethu kwiwebhusayithi yomtshato